Hal qof oo dumar ah doorasho makaga guulaysan kartaa 236 nin oo musharaxiin beeraley ah? - BBC News Somali
Hal qof oo dumar ah doorasho makaga guulaysan kartaa 236 nin oo musharaxiin beeraley ah?
Image caption Sannado badan ayey cabanayeen beeraleyda Hindiya
Dalka Hindiya wuxuu si buuxda u galay dareenka doorashada, iyadoo la filayo in codeynta ay billaabato 11-ka bisha Abriil ee foodda nagu soo heysa.
Muddo saddex isbuuc ah oo ku eg 19-ka bisha May ayey dadku codadkooda ka dhiiban doonaan doorashada ka dhaceysa Hindiya oo lagu tilmaamo dalka ugu weyn dunida ee ay Dimuqraadiyaddu ka shaqeyso.
Siyaasadda Hindiya maxay u dhaafi la'dahay Nehru?
Wax ka ogoow 7 arrimood oo la yaab leh oo ku saabsan doorashada Hindiya
Siyaasiyiin farobadan ayaa u tartami doona kuraasta kala duwan, waxaana ka mid ah kuwo loollanka u gali doona si ay xilalkooda u difaacdaan.
Boqollaal ka mid ah beeraleyda Hindiya ayaa sannadkan u taagan doorashada, si ay ugu xusul duubaan xuquuqdooda.
Beeraleyda ku nool gobolka Koonfureed ee Telangana ayaa sameynaya mydaharaad aan horay looga baranin, kaasoo ay ku doonayaan iney kula wareegaan hal kursi oo muhiim u ah.
Maalintii Isniinta ahayd ayey ilaa 236 qof oo beeraley ah diiwaan galiyeen warqadaha soo xulashada musharraxiinta doorashada, waxaana dhammaantood ay u loollmayaan inay tartanka u galaan hal deegaan oo kaliya.
Lahaanshaha sawirka BBC TELUGU
Image caption 236 qof oo beeraley ah ayaa ku haminaya kursiga baarlamaanka ee hal degmo
Beeraleyda ayaa doonaya in ay baarlamaanka ku biiraan si ay xal ugu helaan caqabadaha heysta beeca dalagga kasoo go'a beeraha.
Iyagoo u tartamaya si madax bannaan ayey doorbideen inay kursigaas kula hardamaan haweeney lagu magacaabo Kalvakuntla Kavitha, oo ah xildhibaanka hadda xilka haya, isla markaana ah gabadha uu dhalay madaxa golaha wasiirrada ee gobolkaas, K Chandrasekhar Rao.
Maxay tani muhiim u tahay?
Arrintan ayaa muujineysa sida ay usii xoogeysanayaan xasaradaha dhinaca beeraha, kuwaasoo hadda saameyn ku yeelanaya doorashada guud ee Hindiya.
Sannadihii ugu dambeeyay, beeraleyda ka howl gala guud ahaan dalkaas ayaa sameynayay mudaharaadyo mararka qaar rabshado watay oo ay ku doonayeen in cabashadooda wax looga qabto.
Dadka wax beerta ayaa la kulmayay caqabado dhinaca adeegga biyaha ah iyo in ay suuq u waayaan dalagyadooda, taasoo ku khasabtay inay ku dhacaan dabin oo ay deymo farobadan qaataan.
Tusaale ahaan, beeraleyda degmada kursigeeda baarlamaanka ay boqollaalka qof ku haminayaan ee Nizamabad, waxay sheegeen in muddo sannado ah ay dowladda federaalka ka codsanayeen in sare loo qaado qiimaha dalagga beeraha.
Waxay qaarkood BBC-da u sheegeen in xilligii ay dhaceysay doorashadii hore loo ballan qaaday in cabashadooda wax laga qabanayo, balse markii dambe aysan dowladdu ka dhabeynin ballan qaadyadaas.
"Si kasta oo aan u mudaharaadnay, wax jawaab ah nalama siinin", ayuu yidhi Venkatesh Kola oo ka mid ah beeraleyda xaafadda Armoor, kana mid ah dadka doorashada kula tartami doona Ms Kavitha.
Mr Kola ayaa sidoo kale sheegay in beeraley badan ay qorsheynayeen ka qeyb galka doorashada, balse ay cadaadis kala kulmeen siyaasiyiinta maxalliga ah.